Fomba fanamboarana bibikely l Melikey
Inona no maha samy hafa ny silikika kilasy sakafo sy ny silikonin'ny sakafo? l Melikey
Ho an'ny ray aman-dreny izay te hampihena kely ny fihanaky ny zanany amin'ny zavatra simika, safidy tsara ny silimoon-tsakafo. Ampidiro ny onja vaovao an'ny mpandraharaha ara-tontolo iainana manao vokatra zazakely amin'ny silipo azo antoka sakafo.Raha mikasa ny hiditra amin'ny tsenan'ny vokatra ho an'ny ankizy ianao na mitady hampiasa vola amin'ny mpiara-miasa vaovao ...
Ahoana ny fomba handefasana vakana silikaly kilasy sakafo l Melikey
Aiza no hividianana vakana silika silika sakafo Melikey
Mety tsara ho an'ny zazakely ve ny teisy silikaly sy Melikey?
Ny fomba hitsarana azy dia bibikely silika misy food l Melikey
Satria ny fahalalàna momba ny vokatra silika dia nohalalinin'ny besinimaro, ny vokatra silikôlika dia tian'ny ankamaroan'ny mpanjifa ihany koa. Rehefa misafidy entana maro ao an-trano dia omena laharam-pahamehana ny vokatra vita amin'ny akora silicone, toy ny bibikely. Amin'ny toe-javatra mahazatra, ireo vokatra vita amin'ny silika ireo ...
Rahoviana ny zaza vao manomboka manao bib? l Melikey
Raha vao 4-6 volana monja ny zanakao dia mbola tsy mahazo mihinana tsakitsaky hanina mba hanamorana ny fisakafoanana sy hisorohana ny fandotoana akanjo. Matetika ianao no mila mahita bibin-jaza tsara indrindra, izay mifanaraka amin'ny ilain'ny zanakao. Niangavy mafy izahay mba handray ny mpanjifa ny sasany amin'ny ...
Azo antoka ve ny bibikely silika? l Melikey
Ahoana no fanadiovanao bibikely silika? l Melikey
Na inona na inona dingana fihinananao dia zazakely tena ilaina ny bib. Amin'ny fampiasana ny bib dia mety ho hitanao fa manasa biby matetika ianao. Rehefa reraka izy ireo, avelao ny sakafo an-jaza marobe mihatra aminy, mitazona azy ireo ho madio dia mety ho fanamby. Matetika, mampiasa s ...
Azonao atao ve ny mametraka bibikely silika ao anaty vilia fanasana vilia? l Melikey
Silily bib dia tantera-drano, izay azo apetraka ao anaty dishewasher. Ny fametrahana ny bib eo amin'ny talantalana eo ambonin'ny lovia fanasana lovia, mazàna dia afaka mampihena ny tasy tsy ilaina! Aza mampiasa fitaovana mamontsina na famotsifotsy. Raha manasa ao an-dakozia ianao, dia azonao atao ny mampiasa savony lovia.
Ohatrinona ny haben'ny zaza bib l Melikey
Raha mbola zaza ny zazakely dia mora mitroka sy mandrora sakafo ao am-bavany ary ny bibikely dia mamaha ny olan'ny ray aman-dreny, mila milaza fotsiny fa ny bibikely malemilemy dia napetraka amin'ny vozon'ny zaza. Ny paosy lehibe dia afaka mahazo ny sakafo latsaka rehetra, ary tsy ho maloto ilay zaza. Ka ...
Inona no dikan'ny bibikely? l Melikey
Ny bibikely kely dia akanjo fitafian'ny zaza vao teraka na zazakely hiarovana ny hoditra marefo sy ny fitafiany amin'ny sakafo, rora ary rora. Ny fanaovana bib zaza dia afaka manamaivana ny adin-tsaina maro ary hanamora ny fivezivezena. Biby kely, ity vokatra tsotra sy tsara ity dia afaka manampy anao hanome sakafo ny zaza na ny zaza tsy misy causin ...
Clip pacifier 6 ho an'ny zaza tsy maintsy andramanao l Melikey
Ny clip Pacifier dia vokatra tena tsara hampihenana ny olan'ny ray aman-dreny sy hanampiana ny zazakely hitombo salama. Eto izahay dia mamintina fanontaniana vitsivitsy momba ny clip pacifier ho an'ny fanovozan-kevitrao, manantena ny hanampy anao hahatakatra tsara kokoa ny clip pacifier. Inona no atao hoe pacifier clip? Pacifier clip dia tena ...
Ianao ve mila clip pacifier? l Melikey
Rehefa manary ny pacifier foana ny zanakao ary tsy maintsy diovinao na soloinao ara-potoana mihitsy aza. Mety tena mila clip pacifier ianao hametahana azy amin'ny lamban'ny zanakao mba tsy ho very ilay pacifier rehefa any ivelany ianao. Volavola maro ihany koa no azo ahantona amin'ny seza fiara, ny strollers ...
Fomba fametrahana clip pacifier amin'ny pacifier l Melikey
Azo antoka atoriana miaraka aminy ve ny sarimihetsika pacifier? l Melikey
Ny clip pacifier dia mety amin'ny ankizy hampiasa ny pacifier hisorohana ny fahaverezana sy ny fandotoana. Ny zazakely sasany dia toy ny mpampandry tany: ny fampiasana pacifiers amin'ny alina dia afaka mamaha ny alahelo, ny hatezerana ary ny alahelo mandritra ny andro. Hanampy azy hiatrika mora kokoa amin'ny tetezamita vaovao izany. I Paci ...
Inona no atao hoe pacifier clip? l Melikey
Ny pacifier clip dia tena mahazo aina amin'ny fampiasana ny ankizy, ary mololo mamonjy aina ihany koa ho an'ny ray aman-dreny. Rehefa mandatsaka hatrany ny pacifier ny zanakao dia afaka manampy anao hamaha ity olana ity ny clip pacifier. Kitiho fotsiny ny sarimihetsika misy ny pacifier amin'ny akanjon'ilay zaza ary ampifandraiso amin'ny faran'ny pacifie ny faran'ny iray hafa ...
Fomba fampiasana clip pacifier l Melikey
Pacifier clip dia mpanampy tsara ho an'ny ray aman-dreny. Rehefa mitazona ilay tadivavarana ny zazakely ary manipy azy dia mila miondrika foana ny ray aman-dreny haka azy io amin'ny tany ary tsy maintsy manadio alohan'ny hampiasana azy. Ny clip pacifier dia manamora ny fampiasan'ny zaza ny pacifier. Koa ankehitriny, don '...
Fomba fanaovana clip pacifier l Melikey
Fantsom-parasy, Rehefa lehibe noho ny 6 volana ilay zazalahy dia mamela ny reniny hanana toky i Neny fa afaka mampitony ny fihetsem-pon'ny zaza ary mampitony ny siligaoma. Tsy aleo ve mandeha any amin'ny magazay mividy clip pacifier, famolavolana DIY amin'ny tanana, ary mamorona ny fahaizanao manokana? Ary ireo nataonao ...
Azo antoka ho an'ny zazakely ve ny sotro silikola? l Melikey
Ny sotro silikôla ankehitriny dia malaza kokoa miseho eo amin'ny lakozian'ny zazakely. Betsaka ny fomba azo soloina plastika, fa maninona no malaza be eo amin'ny reny ny vokatra silikônina? Ny silicone dia fitaovana iray izay azo hamarinina amin'ny ambaratongan'ny sakafo FDA. BPA Maimaimpoana, tsy misy poizina ary tsy misy fofona. Siloo zaza spoo ...
Inona avy ireo vilia baolina tsara indrindra? l Melikey
Ny lovia kely an-jaza dia mahatonga ny fotoana fisakafoana tsy hanelingelina amin'ny suction. Ny vilia zaza dia safidy tsy azo ihodivirana amin'ny fandinihana ny sakafon'ny zaza. Misy vilia baolina an-tsokosoko amin'ny fomba sy fitaovana isan-karazany eny an-tsena. Samy te hahalala isika rehetra, inona ny vilia baolina tsara indrindra? Satria ampiasain'ny zazakely io dia tokony ...
Azo antoka ve ny takelaka zazakely silicone? l Melikey
Ny takelaka silicone dia vita amin'ny silicone vita amin'ny 100% FDA, tsy misy BPA ary LFGB-voamarina, izay azo antoka amin'ny zaza ary tsy misy fofona plastika. Ary azo antoka ny MICROWAVE & DISHASHER & OVEN & FREEZER. Ampirimina marobe no mamporisika ny ray aman-dreny hanome sakafo isan-karazany, ary ampy…
Ahoana ny fomba fanaovana zaza silindone teeter l Melikey
Ny kilalao famokarana silicone dia manampy ny zaza hanamaivana ny fanaintainan'ny ratra. 100% silicone sakafo BPA maimaim-poana, voamarina ny FDA, mety ho an'ny zaza mihoatra ny 3 volana. Ny mpanao sôkôlantsika silicone dia tonga amin'ny endrika biby isan-karazany, Amin'izay fotoana izay dia samy manana ny loko miloko isan-karazany ny karazan-tsika silicone teilia.
Ahoana ny fomba fanaovana vovo-tongolo silicone voanjo l Melikey
Ny vakana Silicone dia azo antoka sy mahomby. Tsy toy ny kitay hazo na metaly, ny volon-tsika dia azo ampiasaina amin'ny gatta-percha, mitaritarika rano amin'ny rano. Mety amin'ny gony zaza malefaka sy nify vao teraka. Vokatra silicone vita amin'ny sakafo 100%, azo antoka tsy misy bisphenol A, tsy misy firaharahina, tsy misy PVC, tsy misy latinina, tsy misy metaly ary tsy misy kadmium-f ...
Manao ahoana ny fiarovana ny silicone teether? l Melikey
Silicone teether, Natao hanampiana ilay zaza mandritra ny fotoan'ny fahasarotana. Mety hanelingelina anao tsara ny zaza mandritra ny fampinonoana. Tazano ny sain-jaza raha mbola mampinono na mampinono anao mba tsy hisian'ny gorodona sy volo. Ny fampiharana ny tsindry malefaka amin'ny vavan'ny zanakao dia hanampy amin'ny fahatafintohinana ...
Aiza aho no afaka mividy vakana vita amin'ny silicone? l Melikey
Beads silicone dia kilalao sensory tena tsara. DIY teode azo ampiasaina, clip nipple sy firavaka momba ny masera hamolavola ny famoronana zaza. Mandritra izany fotoana izany dia mitafy ilay reny bevohoka sy zaza. Fanomezana tena tsara ho an'ny zaza vao teraka izy.Ny silicone chewing beads dia mety amin'ny bas malefaka ...
Inona no atao hoe zaza bib l Melikey tsara indrindra
Baby Bib, mpanampy tsara ho an'ny sakafo mahasalama ho an'ny ankizy. Afaka mihinana mora sy sambatra ny zazakely raha tsy maloto. Aza manahy momba ny hianjera, ny sakafo dia tokony ho salama ary azo antoka, mazàna ho an'ny zazakely mihoatra ny 6 volana. Saingy ny karazana bibi-bolongana dia avy amin'ny karazana karazany - drool bibs, plastika bibs ...
Inona ny sotro sy silicone zazakely tsara set
Sotro silicone sy fantsom-boaka, Fitaovana mason-jaza, voromailala zazakely sy sotro, fitaovana fampiofanana silicone, zazakely mihintsana zaza 1, mety ho an'ny ankizy mihoatra ny 6 volana. Ny kitay fisakafoanana mahafinaritra dia afaka manome sakafo fihinana mahasalama ho an'ny zaza, mba hahafahan'ny zaza mihinana am-pilaminana sy amim-pifaliana. Ka inona moa ny g ...
Inona no vahaolana tsara indrindra ho an 'ny zanako?
Inona no teethers tsara indrindra ho an`ny zazakely?
Hafiriana ny zaza teethe?
Ny orinasa fanamboarana silicone dia nanangona Soso-kevitra vitsivitsy mahafinaritra avy amin'ny mpiserasera, izay azo jerena etsy ambany: Humera Afroz: Mety hanomboka ny zaza ny zaza ao anatin'ny 3-4 volana Ity dia fantatra amin'ny maha-zavatra voalohany azy io. Ny zaza sasany koa dia mahazo nify rehefa feno 18 volana dia tara io. Nandritra ny teething p ...
Azo antoka ve ny mpitaovana hazo?
amin'ny admin amin'ny 20-04-30
Volana inona no azon'ny zaza ampiasaina amin'ny teer?
Mahandro mahavoa teeter silicone ve ianao?
Ny akora silicone zazakely dia ampiarahina amin'ilay zazakely iray "mpiara-miasa tsara", mety hampihena ny tsy fahatomombanan'ny vanim-potoana ho an'ny zazakely, manome fahafaham-po ho an'ny zaza ny fikosoham-bary, koa afaka manolo ny zaza mba hanaikitra zavatra hafa, izay azo antoka kokoa sy madio kokoa .Ny antony ...
Iza no te tsara indrindra amin'ny zazakely?
Nanomboka niborosy nify ilay zaza, hipoitra ny hozatra satria arakaraka ny fihenan'ny fanavakavahana ny nify, fa ny fanaintainana ihany koa dia hahatsiaro tena tsy mahazo aina, ny fihetsiky ny rivotra iainana. afaka manamaivana ny tsy ahateraky ny zaza, ary afaka manampy ...
Ahoana no hidinao amin'ny sôkôlika silicone?
Amin'ny vanim-potoana ho an'ny zaza, ny ray aman-dreny sasany dia hividy ny teeter silicone zaza ho an'ny zazakely, mba hampiasaina amin'ny nify mitoto ny zaza, ho an'ny fahasalaman'ilay zazakely, ny teilikaly silicone dia mila fanadiovana tsy tapaka sy ny famonoana ny zaza, fa ny teà silicone sasany nandrahoina rano amin'ny fanavaozana, izay ...
Azo antoka ve ny mpitsangatsangana silikon?
Teether, fantatra ihany koa hoe molar tapa, nify mifoka, fikosoham-bary, molara, vita amin'ny lakaoly plastika malefaka sy tsy misy poizina, ho fanamaivanana ny tsy fetezan'ny nify lava mandritra ny fotoana mitovy, fa afaka manampy ihany koa ny zaza mampihomehy, mikotrika hetsika. mampiavaka ny fitomboan'ny fahasalaman'ny nify.Misy karazan-javatra gu ...
Inona no atao hoe sakafo silicone l Melikey
Fampidirana Ny halavam-bavan'ny gel silika azo hanina dia manodidina ny 8000nm, ny faritra manokana any dia 300-500m2 / g, ary ny hidina dia hidrofilikitrika, izay manana hery ahafahana rano fanasana. Eo ambanin'ny hamandoana avo dia mitahiry mihoatra ny 80% -100% ny lanjany ny fidiran'ny rano ao aminy. Noho izany, fo ...
Fomba fanaraha-maso ny vokatra silicone - fanaraha-maso fenitra fanjaitra voromanidina silicone
Ny singa lehibe indrindra amin'ny silicone dia ny silika dioksida, izay manana fananana simika azo antoka ary tsy mandoro.Silicone vokatra amin'ny tena fiainana amin'ny fampiasana matetika ary mivelatra kokoa, noho izany dia ilaina ny fanaraha-maso sy ny valin'ny silicone. Ka ahoana ny fizaham-baravarana?
Azo antoka ve ny silicone zazakely?
Ny olan'ny fahasalamana dia loza foana miafina indrindra ho an'ny olombelona. Amin'ny maha reny antenaina anao, ny zava-dehibe indrindra dia ny fanomanana ny filana an-davan'andro ho an'ny zaza hateraka manaraka.Moa nifidy ny zazakely rehetra ianao? Inona ilay marika inona no tsara indrindra, tokony ho henontsika momba ny teilikilika silicone ...
Amin'ny alàlan'ny fikotranan'ny zaza ny nifiny | Melikey
Firy volana 4 no fikosoham-bazana ny zaza hatao |. Melikey
Inona ny kilalao ananan'ilay zaza dia mety manaikitra | Melikey
Karazan-tsika inona no maniry tsara | Melikey
Fepetra efatra ho an'ny fisafidianana ny bibin'ny tena zaza | Melikey
Araka ny fantatry ny reny dia azo atokana sy mifantina ny biblikan'ny zazakely | Melikey
Inona no vidin'ny kilalao zaza
Inona no akora ilaina amin'ny lakaoly nify vita amin'ny hatsarana - silica gel ambonin'izy rehetra
Inona ny kilalao teething dia tokony ho sahy ampiasaina
amin'ny admin amin'ny 19-12-20
Inona no ampiasain'ny zaza zaza telo volana mba hanome kilalao borosy?
Ilay zazakely dia USES silica gel dental gel mandritra ny volana vitsivitsy
Tian'i Darling ny manaikitra ny nonon-dreny ny fomba fanaovana -silôly sily hamahana
tamin'ny admin tamin'ny 19-11-08
Reny be harena be no marary an-doha tsy an-kijanona, rehefa mihalehibe tsikelikely ny zaza, izy ireo koa dia ratsy toetra kokoa, am-boalohany koa tsara mihinana ronono, tsy haiko ny miverina andraikitra, hanaikitra tampoka reny izy, matahotra narary ny nonon'ny reny, koa maninona ny zaza no mihinana m ...
Ny torimaso zazakely mihinana akanjo ny fomba hanaovana azy - teôlônaly silety hanampy anao
Indraindray dia misy fiovana ara-batana sy fitondran-tena, toy ny bika, ny lanja ary ny toe-batana. Hianatra tsikelikely fahaiza-manao kely i zazakely, toy ny famadihana, fandady, fandehanana, fakana zavatra, fihinanana tanana sns. matory ve ny zaza hihinana akanjo hatao? Makà silikôly ...
Ny ambongadiny vita amin'ny silipo dia manome torohevitra fito amin'ny fikolokoloana ny fivalanan'ny nify: matetika ny zaza mandritra ny 4-7 volana ny zaza. Ny zazakely dia afaka 4 volana aorian'izay, manomboka mihombo, ny nify voalohany dia hita amin'izao fotoana izao, eo afovoan'ny siligaoma ambany ny toerana. Matetika, ny nify lava volo sy ny fivalanan'ny zaza ...
Vongan-tsolika ambongadin'ny silily ambongadiny | Inona no lahatsoratra tokony homanin'ny malalako mandritra ny fotoana nify
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 19-10-30
Tsakoina Vakana Beads | Firy taona ny zazakely hilalao lakolosy?
Ambongadiny volo Silika | Inona no tiana hitombo nify te-ho tsikaritra
Azo ampiasaina mandritra ny volana vitsivitsy ny silety teeter
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 19-10-23
Ny zazakely dia afaka mampiasa silipo teether mandritra ny volana vitsivitsy ny silipo teether dia mizara ho habe amin'ny ankapobeny. Noho izany, ny maodely samihafa dia mety amin'ny zazakely amin'ny taona samy hafa. Ny habe kely dia ho an'ny zaza efa-bolana ary ny habe lehibe dia ho an'ny zaza enim-bolana .Ny zazakely amin'ity andiam-potoana ity dia efa hanome ...
Mampitony silety teher-Nahoana ny malalako no maniry nify afaka mitomany
zazakely silikôly Saika ny reny sarobidy rehetra no hitatitra, amin'ny nify lava volo rehefa tsy milamina ny toe-tsaina, tena tia mitomany. Noho izany, rehefa ny nifin-jaza dia ho reraka manokana ny reny harena, mandritra ny andro mba hieritreretana ny fomba hamitahana ny zazakely, tsy mahita tory tsara amin'ny alina. Na ...
Ahoana no tokony hitomboan'ny malalako nify hampinono
Zava-dehibe ny nify mahasalama ho an'ny zazakely sy ny olon-dehibe. Rehefa manomboka mianatra miteny ianao, ny nifinao no mamaritra ny teny sy ny fanononana azy. Misy fiantraikany eo amin'ny fitombon'ny valanoranony ambony koa ny niho… Noho izany, rehefa ny nifin-jaza dia tokony hikarakara tsara ny reny ny nifin'ny zaza oh. Ahoana no tokony dar ...
Mitrikitriky nify ilay zaza izay tsara
Inona no atao hoe molar zaza? Ny hazo dia ampiasaina rehefa tsy manan-nify ilay zaza na efa manana nify. Mampihena ny drooling ny reny. Sarotra ny safidin'ny reny, raha ny tena izy, misy karazan-tsolafin-nify maro, ka karazana nify fikosohan-nify iza no tsara? Ny hamafin'ny antonony, mafy loatra dia handratra bab ...
Olana mahazatra amin'ny tsorakazo fikitroha-nify
F: ahoana ny molara? Enim-bolana sy tapany i Baby ary manana nify roa, ny nify any ambany. Misy ny olona milaza fa tonga ny fotoana hividianana kibon'ny nifin-jaza. Ny zanako dia tia mandevo, ary nividy lakaoly nify ihany koa, saingy tsy matetika no nampiasa silety teather. Fotoana izao hividianana kitay nify zaza hohanina ...
Inona avy ireo fitaovana hampiasana nify
avy amin'ny admin tamin'ny 19-10-09
"Ah ~ ~ ~" niaraka tamin'ny kiakianao iray dia nanomboka nanaikitra ilay zazakely! Fa ahoana no hanomezanao tsiny azy manaikitra anao raha tsy mahazo aina ny siligaoma? Aza te hiseho ao an-trano indray ity karazana kiakiaka ity, azafady manomàna fikolokoloana nify fitaovana ho an'ny zaza faran'izay haingana! inona avy ireo fitaovana enti-milaza ...
Inona no ampiasaina nify nify
Rehefa feno efa-bolana ny zaza dia hangidihidy ny siligaon-jaza, ka tian'ilay zaza foana ny manaikitra zavatra, dia nantsoina hoe nify fikolokoloana izany. Tsy afaka ampiasaina amin'ny fikolokoloana nify fotsiny ny zaza, raha tsy izany dia mety hitarika fihinana be ny zavatra maloto, raha ny marina, betsaka ny zaza desi ...
Inona no atao hoe silety teather mampitony？
Ny silipo tetera dia fantatra amin'ny anarana hoe molar, nify raikitra, natao ho an'ny nify zazakely. Ny zazakely dia afaka manaikitra sy mitsentsitra kofehy silikonika hanamaivanana ny mangidihidy sy ny fanaintainana, endrika mahafatifaty, tsy hisy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny zaza, fa afaka mamela ny mahazo fahafaham-po ara-tsaina ny zaza ary miaro ...
Ahoana ny fampiasana silety teether | Melikey
Silety teeter amin'ny sokajin-taona rehetra Gingiva dingana 1 Alohan'ny itiavako 4-5 volana, rehefa tsy mitombo ara-dalàna ny nify, dia afaka manotra moramora ny siligaoma amin'ny lamba lena na mosara, amin'ny lafiny iray afaka manadio siligaoma, amin'ny lafiny iray hafa kosa dia afaka manamaivana ny tsy fahazoana aina ny malalako. Azonao atao koa ny mampiasa ny rantsan-tànanao ...
Ahoana ny fomba fanadiovana ny teilikôla silika | Melikey
Tandremo ny fividianana silety teether | Melikey
Azonao ve ny maha-zava-dehibe ny fisafidianana akora ilaina amin'ny fanaingoana ny lakozia vita amin'ny silipo?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 19-09-11
Ho an'ny fiainam-pianakaviana, be ny namana manantena fa afaka mahazo ny fiadanan-tsaina izay mampiasa bebe kokoa, mihinana ny fiadanan-tsaina, ny kojakojan-dakozia ary ny kojakoja karazan-vokatra mitovy ihany koa; Tena ilaina ny misafidy vokatra azo antoka , olona maro tokoa no mampiasa lakozia vita amin'ny silipo, fa tsy fitaovana nentin-drazana ...
Ny fanodinana vokatra vita amin'ny silika dia tsy maintsy mijery olana vitsivitsy!
Tamin'ny taona 2018, niaraka tamin'ny dian'ny foto-kevitra sy hevitra maro samihafa, dia hitanay fa nanjary fanao mahazatra ny fampandrosoana manokana ny vokatra silikônina. Amin'izao fotoana izao dia mihamaro ny olona mividy olona tsy mampiasa famokarana fanodinana bobongolo, ny hafa kosa tsy niaraka tamin'ny vidin'ny vokatra fa tsy hoe hanao ...
Ahoana no hamaritana ny kalitaon'ny teôlôro ankizy silika?
Inona no vokatra tsara indrindra amin'ny nify ho an'ny zazakely
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 19-09-03
Rehefa tonga eo amin'ny lampihazo ny zanakao dia hahatsapa fanaintainana na hangidihidy ny siligaoma, hanampiana ny zanany hamakivaky ny nify, ny sasany amin'ireo reny misafidy ny hampiasa teotr-jaza. Saingy misy ny reny sasany izay mahafantatra kely na tsy mahalala momba ny teather ary mbola tsy naheno an'io. Ka, inona no atao hoe teather? Rehefa mampiasa tee ...
Zaza mandroaka zaza mibontsina vahaolana 4 mora
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 19-08-26
Ahoana no tokony hisafidianana silety teeter, fikosoham-bolo hifidy? Samy hafa ny safidin'ny teething
Alohan'ny hividiananao silety teether dia misy zavatra fito tokony hojerenao
Fa maninona ny zazakely no tia silipo tetera?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 19-08-17
Ny silicone teether dia fitaovana matanjaka hamahana ny olan'ny fikoloana nify zaza
Vokatry ny zaza silisy silimo sakafo, Silisy Aisy gilasy
Afaka mamaky ny môdely am-bava an'ny zaza ve ny zazakely?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 19-08-14
Afaka mamaky ny môdely am-bava an'ny zaza ve ny zazakely? Baby teether, fantatra koa amin'ny hoe teather, molar stick, molars, teether sns ... amin'ny ankapobeny vita amin'ny silicone, rubber, latex, thermoplastic elastomer na thermoplastic, dia ampiasaina hampihenana na hanamaivanana ny fikolokoloana ny zaza sy ny zaza chi ...
Ahoana no hanamaivanana ny aretin-nify lava?
1. Ahoana ny fanamaivanana ny aretin-nify mandritra ny nify lava 1.1, siligaoma mihosotra mangatsiaka Mampiasà lamba famaohana mangatsiaka amin'ny tarehy narary nify mba hanamaivanana ny fanaintainana. 1.2. Siligaoma fanorana aorianan'ny fanasana ny rantsan-tananao na fanorana moramora amin'ny siligaoma manokana dia afaka manamaivana vetivety ny fanaintainana. Reny dia afaka manao cot rantsantanana o ...
Fortnite Fortbyte 70: mivezivezy amin'ny alàlan'ny peratra Lazy Lagoon miaraka amina fitaovana Vibrant Contrails
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 19-06-26
Fortnite Fortbyte 70 no sombin-tsarimihetsika azo angonina farany hipetraka amin'ny tontolon'ny lalao, ary hanampy anao hahita izany izahay. Raha ny tokony ho izy, mila mivezivezy amin'ny alàlan'ny peratra Fortnite eo ambonin'ny Lazy Lagoon ianao miaraka amin'ny fitaovana Vibrant Contrails. Midika izany fa alohan'ny hitsambikanao anaty lalao dia mila ny Fo ...
ny fomba fanamorana ny silikonin'ny teather | Melikey
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 19-05-19
Na dia manohitra ny fitomboan'ny bakteria aza ny teheran'ny silôtialy amin'ny sakafo dia mamporisika anao izahay mba hadio; ny fomba fanamorana ny rano savony amin'ny savony na savony lovia 1 、 Azonao atao ny manasa tànana zavatra vita amin'ny silika amin'ny rano misy savony mafana. Makà borosy tavoahangy na spaonjy ary diovy amin'ny rano mafana sy savony lovia. B ...
Inona no atao hoe silicone teether | Melikey
Silicone teethers dia azo antoka eo amin'ny zazakely ny ramy, ary ny misokatra endrika mahatonga azy ireo ho mora tanana kely mba hahatakatra. Ireo teether silicone dia vita amin'ny tsy misy poizina ny sakafo kilasy silicone ka mihasimba eo amin'ny lafiny iray ny fanorana mafy ramy sy hanolotra fanamaivanana ho vao misondrotra nify. Silicone Baby Teether vita tamin'ny sakafo grad ...
Inona no azo antoka ny silicone teether | Melikey
ny mpitantana ny 19-04-29
Baby teethers no ampiasaina mba hampitonena zaza 'ramy, rehefa manomboka ny nifiny avy eo amin'ny manodidina ny 3 ka hatramin'ny 7 volana amin'ny taona. Tena tsy te ianao mba hisorohana ny tsy plastika teethers izay ahitana BPA, PVC, na phthalates. • BPA BPA izay Bisphenol-A dia ny teo ihany ny plastika simika izay Mpaka estrogen sy ny ...
Gel ny tontolo iainana no Silica Friendly | Melikey
Gel ny tontolo iainana no Silica Friendly Fa silica gel sy ny silica gel vokatra tsy misy poizina, fiarovana ny tontolo iainana, olana io matetika mahita olona iray ao amin'ny Internet nanontany. Ny gel vokatra avy amin'ny akora eo an-orinasa sambo ho any amin'ny farany dia tsy mamokatra na misy poizina sy mampidi-doza akora ...
tsara indrindra teether ny 4 volana , silicone teething vakana , voajanahary teething, teething rojo ho an'ny zazavavy kely, silicone teether , silicone zaza teether ,